नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरू, पहिलो खोप डा. सागर राज भण्डारीले लगाए - CNN EXPRESS
नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरू, पहिलो खोप डा. सागर राज भण्डारीले लगाए
माघ १४, काठमाडौं । नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरू भएको छ । नेपालमा पहिलो ‘कोभिशिल्ड’ खोप काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा। सागर राजभण्डारीले लगाएका छन।
राजभण्डारीले खोप लगाएपछि खुशी लागेको बताएका छन । राजभण्डारीले भने ‘यो पनि इन्फ्लुएन्जा खोप जस्तै हो । डराउनुपर्ने कुरा छैन । त्यसैले खोप लगाउनु पूर्व पनि र लगाएपछि खुशी नै छु। स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैले उत्साहित भएर खोप लगाउनुहोस् भन्न चाहन्छु ।’
भारत सरकारको अनुदानमा माघ ८ गते १० लाख मात्रा खोप नेपाल ल्याइएको हो । ‘कोभिशिल्ड’ खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका नामक औषधि उत्पादक कम्पनीले संयुक्त रुपमा विकास गरेका हुन् । भारतको सेरम इस्सिच्युटले खोप उत्पादन गरेको हो ।
Previous: दक्षिण कोरियामा बिरालोमा पहिलोपटक कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, सबैलाई सचेत रहन आग्रह
Next: जनकपुर यातायात कार्यालयमा अख्तियारको छापा, कार्यालय प्रमुख सहित दुई जना नियन्त्रणमा